हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिसहरू र सुझावहरू ल्यायौं - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: यो कसरी सम्भव छ सार्वजनिक यातायातको लागि नि: शुल्क? - एस्टोनिया - तल्लिन
अर्को पोस्ट: पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटोग्राफिक सफारी र पशु पाठ - दक्षिण अफ्रिका
हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता ल्यायौं र कोरोना भाइरसको बारेमा सिफारिसहरू र मेक्सिकोको बारेमा सुझावहरू ल्यायौं!
मैले एरिकालाई रियो दि जेनेरियोको खाना खाने समयमा भेटे। र उनी हाम्रो टुर समूहमा सामेल भइन् र हामी समान टेबुल साझा गर्‍यौं। हाम्रो टेबुल कत्तिको अन्तरराष्ट्रिय थियो भनेर एरिका अलि अलि उत्सुक थिइन।
हामीसँग व्यक्तिहरू थिए: हंगेरी (र तपाईं यहाँ क्लिक गरेर यो महान मित्र, क्रिस, संग साक्षात्कार हेर्न सक्नुहुन्छ), संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, टुर गाइड अर्जेन्टिना थियो - हो हामीसँग अर्जेन्टिना गाइड रहेको ब्राजिल देखाइएको थियो - र म ब्राजिलियाई हुँ र म अष्ट्रेलियाबाट मेरो साथीलाई लिन रियो दि जेनेरियो गएँ। त्यसपछि हामी एरिका र डिएगो जो म्याक्सिकोका थियौं! र त्यसले हाम्रो टेबललाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय बनायो।
मलाई वेटरको लागि दु: खी लागेको थियो, उसले वास्तवमै हाम्रो भाँडा र पेय पदार्थहरू ल्याउनको लागि जादुगरी गर्‍यो। भाग्यवस, एरिका र मैले उसलाई चीजहरू सजिलो बनायौं।
र यसैले मैले एरिका डी। ब्यारनलाई भेटें जुन म आज अन्तर्वार्ताको लागि जाँदैछु।
थप विज्ञापन बिना नै अन्तर्वार्तामा जान दिनुहोस्!
सामान्य रूपमा यस ब्लगमा अन्तर्वार्ताहरूमा स्पिकरको अनुसार रंगहरू परिवर्तन हुनेछन्। (हामी र Mexico्गहरू मेक्सिको र ब्राजीलको बीचमा प्रयोग गर्दछौं)।
१- एरिका, तपाईं कहाँ जन्मनुभयो र आज तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ?
मेरो जन्म उत्तरी मेक्सिकोको एउटा सानो शहरमा भएको थियो जुन तामाउलीपासको राज्यको टेम्पीको हो। तर years बर्ष अघि म राजधानी, मेक्सिको सिटी सरे।
२- र तपाईको काम के हो?
म औषधी प्रबन्धकको रूपमा फार्मास्यूटिकल कम्पनीमा काम गर्छु।
कोरोनाभाइरसको बारेमा कुरा गर्दै
-- त्यसोभए यसको मतलब यो छ कि हामीमा कोरोनाभाइरसको बारेमा विश्वास गर्न सक्ने कोही छ। एरिका, यहाँ ब्राजिलमा हामीसँग यस बारे धेरै गलत जानकारी छ। र धेरै आतंक पनि। त्यसोभए मैले तपाईंलाई सोध्नु पर्छ: के हामीले मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्छ कि कोरोनाभाइरसमा संक्रमित जो कोहीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ? म त्यो तरिका सोध्छु किनकि यहाँ ब्राजिलमा व्यक्तिहरू केवल संक्रमित व्यक्तिको केस मात्र रिपोर्ट गर्छन् र यसका कारण कति जना मरेका छन्। र मलाई लाग्छ कि यो सत्य होइन। तर म गलत हुन सक्छ। के त्यहाँ व्यक्तिहरू राम्रै छ?
पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनका लागि हामीले यो याद गर्नुपर्दछ कि कोरोनाभाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: ज्वरो, खोकी, सास फेर्न कठिनाई, सर्दी, शरीर दुखाइ, टाउको दुखाइ, मतली, नाकको भीड… लक्षण सामान्य फ्लू सहित धेरै अन्य बिमारीहरू जस्तै छन्।
त्यसो भए, होइन, यदि तपाइँ कोरोनाभाइरस पाउनुभयो भने यसको मतलब तपाई मर्नुहुनेछ भन्ने छैन। जे भए पनि डाक्टरले एक निदान गरे कि तपाई कोरोनाभाइरस बाट संक्रमित हुनुहुन्छ, तपाई सतर्क हुनु हुँदैन। सीडीसीले रिपोर्ट गरेको छ कि केवल वृद्ध वयस्कहरू र मधुमेह वा हृदय, वा फोक्सो, वा मिर्गौला रोग जस्ता दीर्घकालीन वा गम्भीर चिकित्सा अवस्था भएका व्यक्तिहरू धेरै जोखिममा रहेका समूहहरू हुन्।
रिपोर्ट गरिएको कोरोनाभाइरस संक्रमण धेरै जसो हल्का रोगहरू हुन्। र गम्भीर व्यक्तिहरू १ 16% मामिलाहरूमा देखा पर्दछन्। धेरै जसो रिपोर्ट गरिएका केसहरू सुधार हुन्छन् र अस्पतालहरूबाट डिस्चार्ज हुन्छन्।
- त्यसोभए के हामी कोरोनाभाइरसलाई रोकथामको तरीकासहित "नयाँ सार्स" को रूपमा व्यवहार गर्न सक्दछौं? यसले आधारभूत हेरचाह समावेश गर्दछ जस्तै: आफ्नो हात धुनु, अरूको चुँडा नखोल्ने, वा मास्क लगाउने हो भने तपाईं संक्रमित हुनुहुन्छ भने?
हो, यो रोग लाई रोक्नको लागि उत्तम तरिका हो। बिरामी व्यक्तिहरूसँग घनिष्ठ सम्पर्कबाट टाढा रहनु, आँखा, नाक र मुखलाई छुनुबाट टाढा रहनु, खोकीलाई ढाक्नु वा टिस्वा वा हातको आवरणले छुंकुनु र साबुन र पानीले तपाईंको हात धुनु भनेको कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म धुनु हुँदैन। उपचार गर्ने एक तरिका, तर संक्रमण रोक्नको लागि उत्तम तरिका।
5-- के त्यहाँ कुनै ठाउँ (वेबसाइट) को सिफारिस छ केहि यात्रा गन्तव्यहरु लाई हटाउन को लागी?
हो, म CDC (रोग नियन्त्रण केन्द्र) पृष्ठ जाँच गर्न सिफारिस गर्दछु:
यो पृष्ठ वैज्ञानिक र योग्य जानकारीको एक राम्रो स्रोत हो, डाक्टरहरूले समय-समयमा यसको परामर्श लिन्छन्।
Well- ठिक छ, अब गन्तव्यहरूको बारेमा कुरा गरौं, चीजहरू अझ शीतल बनाऔं। (यी सबै पछि ट्राभल ब्लग हो)। कोरोनाभाइरसको बारेमा यी सबै स्पष्टीकरण ल्याउनु भएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं।
एरिका, तर अहिले मेक्सिकनको रूपमा तपाईंलाई मेक्सिकोको बारेमा के मनपर्दछ?
मेक्सिकोमा मलाई मनपर्ने धेरै चीजहरू छन्, म संस्कृति र खानाको बीचमा हुनेछु।
- मेक्सिकोमा के परिवर्तन हुन्छ यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने?
यदि म सक्दिन भने, म सरकारी स्रोतहरूको विनियोजन परिवर्तन गर्नेछु र उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्नेछु।
- र तपाइँको मनपर्ने डिश के हो?
टाकोस अल पादरी, पक्कै पनि। तपाईंले उनीहरुको प्रयास गर्नु पर्छ
- जब हामी मेक्सिकोको बारेमा कुरा गरिरहेछौं, कुन स्थानहरू तपाई पहिलो पटकको पर्यटकलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ? (विशेष गरी मेक्सिकोको मेरो पहिलो यात्रामा मयान पिरामिडहरू, र क्यानकन, टुलमको समुद्री तटहरूमा म मोहित भएँ ... मैले भन्न सक्दिन जुन उत्तम हो)।
मेक्सिकोमा धेरै पर्यटन गन्तव्यहरू छन् र यो तपाईं कुन प्रकारको रमाइलो चाहनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। क्यानकन र लस क्याबोस साँच्चिकै सुन्दर छन्, तर यदि तपाइँ संस्कृतिमा गहिरो जान चाहानुहुन्छ भने म ओक्सका, सान मिगुएल डे एलेन्डे र मेरीडा सिफारिस गर्दछु।
१०- र मलाई थाहा छ तपाईं ब्राजिलमा केही समयको लागि बस्नुभयो! तपाईलाई के मन पर्छ? र ब्राजिलियनहरु तपाई संग राम्रो व्यवहार गर्नुभयो? मलाई आशा छ, वा मैले कसैलाई मार्नु पर्छ। कसले इरिकालाई राम्रोसँग व्यवहार गर्न सक्दैन? उनीले वेटरको लागि चीज अनुवाद गर्न पनि सहयोग पुर्‍याइन्। उनी अचम्मै छिन!
ए, दयालु शब्दहरूका लागि धन्यवाद। मलाई ब्राजिल मन पर्यो! खाना अद्भुत छ र स्टाफ यति मित्रवत छ! मैले त्यहाँ तौल प्राप्त गरेको छु।
ब्राजिलियालीहरूले मेरो साथ राम्रो व्यवहार गरे, उनीहरुले "पोर्टुनहोल" (पोर्तुगाली + स्प्यानिश) पनि बोल्ने प्रयास गरे जसले पोर्तुगाली भाषा बोल्न नसक्नेलाई थोरै मद्दत पुर्‍यायो। hehe।
११ - खैर, र त्यहाँ ब्राजिल को सुधार गर्न को लागी कुनै सुझाव छ?
साँच्चिकै होईन, तपाईलाई आफ्नो संस्कृतिमा गर्व छ।
१२ - ठिक छ, हामी अन्तर्वार्ता समाप्त गर्नु अघि अन्तिम शब्द के? के तपाईं साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ, यस ब्लगमा रेकर्ड गर्न?
स्वस्थ रहनुहोस् र जीवनको आनन्द लिनुहोस्!
२ rare- फेब्रुअरी अनन्त रोगका अन्तर्राष्ट्रिय दिन। (एरिकाको हातमा कोरिएको प्रतीक हो)
एरिका, तपाईंसँग फेरि कुरा गर्दा खुसी लाग्यो। अन्तर्वार्ताको लागि धन्यवाद, र कोरोनाभाइरसको बारेमा सबै विवरणको लागि। र मेक्सिकोमा पनि सुझावहरूको लागि!
र म यहाँ यो पोष्ट समाप्त गर्दछु।
यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने, यस ब्लगलाई छेउमा रातो बटनमा क्लिक गरेर समर्थन गर्नुहोस्। वा तलको विश्वमा क्लिक गरेर थप पढ्नुहोस्।
साक्षात्कार कोरोनाभाइरस मेक्सिको मेक्सिकन पोर्टुनहोल tacos